Shiinaha Customized bacaha beddelaya saarayaasha, Shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Bacda xafaayadda > Bacaha carruurta beddela
Bacda beddelashada ilmaha
1. Horudhaca alaabada ee bacda badalaysa ilmaha:
(1) Bacdan beddelaysa xafaayadda waxay ka samaysan tahay maro maro qudhaanjo ah. Dusha sare waxaa lagu daboolay daahan biyaha celiya. Waxay leedahay sifooyin xoog leh oo biyo-sifeyn ah waxayna si wax ku ool ah uga hortagi kartaa roobka inuu qoyo bacda xafaayadda ilmaha beddelaysa muddo gaaban. Dharkaan wuxuu leeyahay astaamaha u adkeysiga xirashada iyo dareenka gacmaha oo aad u fiican
(2) 210D maro Oxford ah ayaa lagu isticmaalaa gudaha, kaas oo leh xoog is jiidjiid iyo dareen gacmeed.
(3) Noocan bacda beddelaya xafaayadda, waxaan u isticmaalnaa maaddada super ningax si aan uga dhigno aagga heerkulka. Waxqabadka kuleylka kuleylka xoogan wuxuu si weyn u dheereeyaa waqtiga kuleylka kuleylka.
(4) Bacda qalalan ee qoyan ee kala-soocida ayaa si wax ku ool ah u kala soocaya qalabka qalalan iyo kuwa qoyan, taas oo si weyn uga hortageysa faafitaanka bakteeriyada iyo sumowga waxyaabaha kale ee ilmaha.
(5) Boorsadeena xafaayada ayaa sidoo kale lagu dhex ridi karaa gaariga wax lagu gado si loo yareeyo culeyska hooyada isla markaana ay ugu fududaato hooyadu inay daryeesho ilmaha.
(6) Bacaha balastarka ee shaqeynaya, sida bacaha lagu keydiyo suufka, boorsooyinka lagu keydiyo dharka, boorsooyinka lagu keydiyo toy, bacaha keydka taangiga budada ah iyo boorsooyinka keydka kuleylka. Dibedda waxaa loogu talagalay boorsooyinka wax lagu kaydiyo ee shaqeynaya, sida boorsooyinka lagu keydiyo boorsada, boorsooyinka lagu keydiyo parasol iyo boorsooyinka keydka tuugga ee looga hortago tuugada (7) Muuqaalka casriga ah iyo nashqadda kartida weyn leh labaduba waa qurux badan yihiin waxayna qaadan karaan alaabooyin badan oo daryeelka carruurta ah.
(8) Waxaa jira marin furan oo ku habboon dhabarka, kaas oo si fudud ula soo bixi kara waxyaabaha hoose ee bacda xafaayadda
(9) Waxaan u isticmaalnaa jiinyeerka caanka ah ee YKK sidii wax lagu furo bacda xafaayadda lagu beddelayo. Jiinyeerkani wuxuu leeyahay xoogaa qaniinyo sare wuxuuna si weyn u wanaajin karaa isku halaynta iyo badbaadada shaqada furitaanka boorsada.
2. Xaddidyada alaabta (qeexitaannada) bacaha beddelaya ilmaha
290T twill maro isku dhafan oo biyaha celiya Oxford
Madow, casaan, casaan, cagaar
·Cabir: Uguyaraan, waxaad ubaahantahay boorsada dhallaanka oo qaadi karta xafaayadaha, masaxa iyo hal ama laba dhalo. Haddii aad diyaar u tahay inaad wax u diyaar garowdo, markaa waxaad u baahan doontaa wax ballaaran oo ku filan si aad u beddesho dharka, alaabta carruurtu ku ciyaarto, cuntooyinka fudud, calallada, masruufayaasha, qamaarrada iyo nadaafadda gacmaha.
· Suunka gaariga lagu riixo: Boorsooyin badan oo xafaayad ah ayaa lagu qalabeeyaa suumano gaar ah oo si fudud ugu xirnaan kara baraha gaariga.
· Suuf beddelashada xafaayada: Bacaha xafaayadaha qaarkood waxaa ku jira suuf beddelaya oo la dhaqaajin karo ama laga laaban karo bacda si loogu beddelo xafaayad isla markiiba ah.
· Si fudud loo nadiifiyo: noloshu waa xaqiiqo-ku dhowaad wax kasta oo carruurta ku xeeran iyo hareerahooda ayaa qasmaya, markaa waxaad u baahan kartaa bac xafaayad ah oo mashiin lagu dhaqi karo, ama bac xafaayad ah oo dhaqso loo tirtiri karo.
5. Baakadaha iyo dhalmada bacaha beddela ilmaha
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 43cm X 30 cm X 20cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka
(3) faahfaahinta xirxirida: 48cm X 33m X 45cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 8.7Kg
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 7.5Kg
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonaa baakadka cunuggaan yar ee beddelaya iyadoo loo eegayo shuruudahaaga
(9) Haddii aad ubaahantahay shaybaarka bacahan beddelaya cunuggan, waxaan dooran doonnaa inaan hawada kuugu soo dirno.
(4) Waxaan si adag u xakameyn doonnaa tayada wax soo saarka oo waxaan kuu soo gudbin doonaa adiga oo leh heerka dhaafitaanka 100%
Q3aad. Qaab sheegis ah kee aqbashaa? Immisa maalmood ayaa muddada xigashada?
(3) Waxaan nahay soo saaraha Disney bacaha beddelashada bacaha, Wal-Mart bacaha iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
(5) Waxaan nahay soosaaraha Disney bacaha badalaya, boorsooyinka Wal-Mart iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Bacaha carruurta beddelaya, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, loo habeeyay, qiimaha, oraahda, keydka